ဘူတာအိုထဲမှာ ရထားအိုကို စောင့်နေသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ဘူတာအိုထဲမှာ ရထားအိုကို စောင့်နေသူများ	7
Posted by Thint Aye Yeik on Feb 18, 2016 in Poetry |7comments
ဘယ်လိုမှ ဝေခွဲမရတဲ့ အဖြစ်မျိုးဆိုပါတော့…
အထုပ်အပိုးတွေပေါ်မှီတွယ်ရင်းပဲ တရေးတမော ပြန်အိပ်ပျော်သွားကြလေရော…
.ထောင်ချောက်တွေ အပြိုင်းအရိုင်းဖူးပွင့်နေတဲ့ လမ်းအတုတွေထဲကနေ…
.မြေပြင်ပေါ်မှာ စိုက်ထောင်ထားတဲ့ အပ်တစ်ဖျား….
ထိပ်တိုက်ဆုံဖို့ ခက်ခဲလွန်းသလိုမျိုး ဆိုပါတော့….
”အမှန်တရားကို လိုလားသူတွေ”နဲ့ ”အမှန်တရား”…
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: တရားမဲ့ မသေအောင် ဘုရားနဲ့နေပါ ဒဂါဂျီး
သာဓု သာဓု စာဓု
သင့်အေးရိပ် says: အမျှ အမျှ အမျှ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .လူအများစုဝေးနေကြသည်
.ကလေးခပါပေးကြသည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
သင့်အေးရိပ် says: ဒီရထားကြီး ထွက်ချိန် မမှီဘူးဆို….
.နောင်အနာဂတ်က သိပ် မသေချာ….
အရာရာ အောက်ကျနောက်ကျ မနေရအောင်….
.မေမေနိုင်မှ ဖြစ်မှာ..ပါ… ကိုယ့်စိတ်ထဲ ပေါ်လာတာ ကိုယ် ချရေးကြေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: စောင့်ရတဲ့ လူတွေ လည်း အို အို လာပြီ။
သင့်အေးရိပ် says: အသက်တွေ ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ… grow-old ပဲ ဖြစ်သွားလို့တော့ မရဘူး..
grown-up ဖြစ်လာဖို့လည်း.. နေတတ်ရအုန်းမယ်ထင့်….
အောင် မိုးသူ says: စောင့်နေပါမယ် ရပ်စောင့်နေပါ့မယ်